တရုတ် Glass ကိုပျံ့, Glass ကိုမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့, ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ထုတ်လုပ်သူ
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:glass ကိုပျံ့နှံ့,Glass ကိုမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့,ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့,ရနံ့ကုထုံရေနံပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > glass ကိုပျံ့နှံ့
glass ကိုပျံ့နှံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, glass ကိုပျံ့နှံ့, Glass ကိုမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Ultrasonic Aroma Glass ပျံ့ဆီမီးအိမ်အသေးစား Humidifier
Whisper တိတ်ဆိတ်သော Ultrasonic 100ml Glass Diffuser ရနံ့ကုထုံး
Cool Mist Humidifier Glass Mist Diffuser ကိုရေမှုန်ရေမွှား
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ Aromatherapy များအတွက် Ultrasonic Glass ကိုပျံ့
Ultrasonic Humidifier ဖန်ခွက် Nebulizer ပျံ့လူငယ်နေထိုင်မှု
Glass ကိုမြူခိုး Humidifier မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Cool
Glass ကိုရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီမွှေးပျံ့နှံ့ Walmart
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီသည် Ultrasonic အနံ့အနံ့ပျံ့
ရောင်းပြီးနောက်တွင် 3D Glass အမွှေးနံ့သာဆီရေမွှေးပျံ့နှံ့မှုကိုအာမခံပါသည်
သစ်သားအစေ့အောက်ခြေ Glass Ultrasonic အမွှေးအကြိုင်ပျံ့
Ultra Easy စစ်ဆင်ရေး Electric Mini Aroma Glass Diffuser
စင်္ကာပူကနေဒါအတွက် Ultrasonic Glass Oil Diffuser
Air Humidifier ဖန်အိတ်ဆောင်အနံ့ဆိုးရောင် Ultrasonic
အနံ့ပျံ့ Glass ကိုလက်ကားစျေးပေါတဲ့ဈေးနှုန်း
Glass ကို Wood ကကောက်ပဲသီးနှံအနံ့ပျံ့ရေနံအမေဇုံ Uk
Glass ကို Cap နှင့်အတူလျှပ်စစ်မူလစာမျက်နှာ ROOM တွင်အမွှေးအကြိုင်ပျံ့
လက်ကား Glass ကိုရနံ့ကုထုံလျှပ်စစ်ပျံ့
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မရှိမဖြစ်ရေနံ Nebulizer အနံ့ပျံ့
ထိပ်တန်းအမေဇုံအကြီးစား Ultrasonic အမွှေးအကြိုင်အနံ့ပျံ့
ကြီးမားသောအခန်းအိပ်ခန်းအတွက် Glass Room Diffuser Humidifiers များ ၁။ ဖန်ခွက်အဖုံး၊ အက်တမ်စင်ကြယ်သောရေ၊ ဓာတ်သတ္တုရေ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေ ၃-၅ ခ၊ ချေးနိုင်သည့် PP ရေတိုင်ကီ။ ၂။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏စိတ်နေစိတ်ကိုသက်သာစေသည်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်နေရာဖန်တီးပါ။ ၃။ အအေးခံ၊ ရောင်စုံမီး။...
သင် ultrasonic humidifier လိုအပ်ပါသလား? သင့်မိသားစု၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါ အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အိပ်ခြင်း။ သင်၏နေ့လည်စာစားချိန်၌အနားယူရန်ရုံး၌တစ်ယောက်ထားပါ။ သင်၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအနားယူရန်ညဘက်တွင်အိပ်စက်အနားယူနိုင်ရန်ကူညီပေးပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင့်တက်။ အားလပ်ရက်များအတွင်းစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေရန်၊...
Whisper တိတ်ဆိတ်သော Ultrasonic 100ml Glass Diffuser ရနံ့ကုထုံး သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလွယ်ကူခြင်း - အအေးခံအစိုဓာတ်အားပေးစက်သည်ခြောက်သွေ့မှုများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးသင်၏ခြောက်သွေ့သောအသားအရေ၊ နှုတ်ခမ်းများနှင့်အကှေ့များကိုကူညီ ပေး၍ သင့်အားလတ်ဆတ်သောသက်တောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးစွမ်းသည်။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှု -...
Cool Mist Humidifier Glass Mist Diffuser ကိုရေမှုန်ရေမွှား Aroma ပျံ့နှံ့မှုနှင့် humidifier ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသင်ကြည့်လျှင် ultrasonic ပျံ့နှံ့မှုသည်ရေနည်းလေလေလေ humidifier သည်ပိုမိုများပြားသောရေကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ Aromatherapy များအတွက် Ultrasonic Glass ကိုပျံ့ ရောင်စုံ ၁၄ ခုနှင့်ထူးခြားသောအလင်းရောင်သက်ရောက်မှု။ LED မီးကိုဖွင့်ရန်“ Light” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ အရောင်တစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ အရောင် ၇ ရောင်သည်တောက်ပ။ မှိန်မှိန်သွားသည်။ သင်တို့သည်လည်းတ ဦး...
Ultrasonic Humidifier ဖန်ခွက် Nebulizer ပျံ့လူငယ်နေထိုင်မှု အလှဆင်ဒီဇိုင်း: ABS + PP + ဖန်ထည်ပစ္စည်းများ၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ အောက်ခြေဆီလီကွန်သည်ချောသိပ်သည်းခြင်းမရှိဘဲကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောစီမံကိန်းareaရိယာသည်သင်၏အိမ်၊ ရုံးခန်း၊ , အားကစားရုံသို့မဟုတ်ဝင်း။ အလုပ်လုပ်ပုံ - LED...
Glass ကိုမြူခိုး Humidifier မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Cool အနံ့ပျံ့။ ပိုကြီးတဲ့ထွတ်ဆိပ်ကမ်းကိုအတူဒွန်တွဲက Black ဖန်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းမိုးလုံလေလုံစိုစွတ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီး, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကြွင်းသောအရာမနှောက်ယှက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အံ့သြဖွယ်ပွော့လေထု, အတွက် ultra-တိတ်ဆိတ် mode ကိုအသုံးပြုပါ။ Glass ကိုပျံ့စွမ်းဆောင်ရည် - 200ml ။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၂၁၅ * ၂၀၀ * ၁၃၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - 445 * 415 * 425mm / 12PCS
Glass ကိုရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီမွှေးပျံ့နှံ့ Walmart ပျံ့နှံ့မှု၏အထိရောက်ဆုံးပုံစံ။ ဆီများမှာအပူမပေးပါ။ သမားရိုးကျမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ burners များနှင့်အပူပေးစက်များနှင့်မတူဘဲဤဖန်ပျံ့နှံ့မှုသည်အလွန်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတုန်ခါမှုအောက်ရှိရေနှင့်ရေကိုကောင်းသောအခိုးအငွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသော ultrasonic...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီသည် Ultrasonic အနံ့အနံ့ပျံ့ [Ultrasonic နည်းပညာ] မီးလောင်ခြင်း (သို့) အပူပေးခြင်း၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုမပျက်စီးစေခြင်း၊ Ultrasonic ပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ၏သမာဓိကိုသေချာနှင့်ကျန်းမာကိုယ်ခန္ဓာစုပ်ယူမှုခွင့်ပြုသည်, စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချ, ပိုးမွှား &...
ရောင်းပြီးနောက်တွင် 3D Glass အမွှေးနံ့သာဆီရေမွှေးပျံ့နှံ့မှုကိုအာမခံပါသည် 3D Glass Diffuser သည်လှပသောလေထုစိုထိုင်းဆဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မှော်မီးရှူးမီးပန်းများသည်အရောင်အသွေးစုံလင်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးပြီးအခန်း၏ကောင်းကျိုးများကိုထပ်ဖြည့်ပေးသည်။...
သစ်သားအစေ့အောက်ခြေ Glass Ultrasonic အမွှေးအကြိုင်ပျံ့ အနုပညာလက်ရာများ - အလှဆင်ထားသောဖန်ပျံ့နှံ့မှုသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူချိန်မြင့်မားစွာတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သာမန်ဖန်များထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။...
Ultra Easy စစ်ဆင်ရေး Electric Mini Aroma Glass Diffuser Dituo ၏မွှေးကြိုင်ပျံ့နှံ့သောအေးဆေးတည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့်မည်သည့်အခန်းကိုမဆိုဖမ်းစားပါ။...
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ဖန်မျှင်ဖန်သားရေပျံ့သည့်စိုထိုင်းဆ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံဖြန့်ဖြူးသူနှင့်မတူဘဲ Dituo ဖန်သားပြင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့မှုသည်သင်၏နေရာတိုင်း၌စိတ်အသက်သာဆုံးသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ကူညီရန်အသေးစိတ်ကိုအထူးဂရုပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။...
စင်္ကာပူကနေဒါအတွက် Ultrasonic Glass Oil Diffuser အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး - Glass diffuser သည် BPA ကင်းလွတ်ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဖန်အဖုံးပါ ၀ င်ပြီးအန္တရာယ်ရှိသည့်ပစ္စည်းများမပါ ၀ င်ဘဲအလိုအလျှောက်အလိုအလျောက်ပိတ်ထားနိုင်သောလုံခြုံရေးလက္ခဏာရှိသည်။ Ultrasonic...
Air Humidifier ဖန်အိတ်ဆောင်အနံ့ဆိုးရောင် Ultrasonic အထွေထွေမိတ်ဆက်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ ဒီအနုပညာဖန်ခွက် ultrasonic အနံ့ပျံ့နှံ့ရိုးရှင်းစွာနှင့်ကြော့ရှင်းသငျသညျသဘာဝမွှေးကြိုင်သောလေထုဆောင်တတ်၏! ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင်များ: ၁။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 195 205 * 115mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 60 * 42.5 * 25cm / 12PCS
အနံ့ပျံ့ Glass ကိုလက်ကားစျေးပေါတဲ့ဈေးနှုန်း 100ml စွမ်းရည်: သင်၏ဧည့်ခန်းသို့မဟုတ်အိပ်ခန်းများအတွက် Glass ကိုပျံ့နှံ့ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစား။ ရေထွက်ပြေးလာသောအခါကို Safe အလိုအလျောက်ပိတ်ထား။7LED မီးလုံးတိကျတဲ့အရောင်သတ်မှတ်ထားသံသရာ mode ကိုအတွက်သို့မဟုတ်ပိတ် operated နိုင်ပါသည်။ Glass...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 200 215 * 135mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 415 445 * 425mm / 12PCS
Glass ကို Wood ကကောက်ပဲသီးနှံအနံ့ပျံ့ရေနံအမေဇုံ Uk ရိုးရှင်းစစ်ဆင်ရေးအနံ့ပျံ့: 1. ရာထူးဆီကိုပျံ့တက်, ဖန်ခွက်အဖုံးကိုဖယ်ရှားဒေါင်လိုက်အထက်သို့ဆွဲ။ 2. မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့၏အခြေစိုက်စခန်းမှာ, DC input ကိုပေါက်သို့ AC adapter ချိတ်ဆက်ပါ။ 3. ~32 နှင့်အတူ 100ml နှုန်းရေ Add မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ (ရေနံမပါ)...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 190 190 * 140mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 585 * 395 * 300mm / 12pcs
Glass ကို Cap နှင့်အတူလျှပ်စစ်မူလစာမျက်နှာ ROOM တွင်အမွှေးအကြိုင်ပျံ့ Ultrasonic ပျံ့အခန်းသို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ diffuse ဖို့ရေနှင့် ultrasonic လှိုင်းတံပိုးကိုအသုံးပြုပါ။ သူတို့ကအချို့သောအင်္ဂါရပ်ရောင်စုံမီးလုံးနှင့်အချိန် mode ကိုနှင့်အတူမဝင်။ Ultrasonic မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့အကျိုးကျေးဇူးများ:...
လက်ကား Glass ကိုရနံ့ကုထုံလျှပ်စစ်ပျံ့ KOMEITO မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီအများအပြားပေါက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖို့အဖုံးကိုဖွင့် (မပါဝင်), ဇင်စိတ်ကူး၏ရိုးရှင်းစတိုင်၌ဤ ultrasonic အနံ့ပျံ့မွှေးသောအိပ်စက်ခြင်းများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းနှင့်အသားအရေတိတ်တဆိတ်ပွော့အမွှေးအကြိုင် infusing အားဖြင့်အစိုဓာတ်နှင့် ultrasonic...
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မရှိမဖြစ်ရေနံ Nebulizer အနံ့ပျံ့ Glass ကိုပျံ့ပျော့ပြောင်းလဲအရောင်များနှင့်အတူအံ့ဩဘွယ်သောအပြော့လေထုနှင့်အခိုးအငွေ့တစ်ငြိမ်သက်စီးဖန်တီးပေးပါတယ်။ အဆိုပါကြော့ဒီဇိုင်းဖန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ဆိုအခန်းသင့်လျော်နီးပါးတိတ်ဆိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်နေသောအခါ,...
ထိပ်တန်းအမေဇုံအကြီးစား Ultrasonic အမွှေးအကြိုင်အနံ့ပျံ့ [Ultrasonic နည်းပညာ] အဘယ်သူမျှမမီးလောင်ရာသို့မဟုတ်အပူ, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီမရှိပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, built-in အပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ Ultrasonic ပျံ့ပျံ့ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံမော်လီကျူးတည်ဆောက်ပုံ၏သမာဓိသေချာကျန်းမာကိုယ်ထင်ရှားစုပ်ယူဘို့ခွင့်ပြု,...
တရုတ်နိုင်ငံ glass ကိုပျံ့နှံ့ ပေးသွင်း
အထူး Glass ကိုဖုံးဒီဇိုင်း: ဒီဖန်ခွက်ပျံ့ Glass ကိုအဖုံးများနှင့် PP ရေတိုင်ကီကိုအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအနားယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်နေ့လုံးပျော်မွေ့ပါစေ, ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ရနံ့ကုထုံပေးသည်။
စူပါတိတ်ဆိတ်မှုစစ်ဆင်ရေး: ultrasonic နည်းပညာကိုသုံးပြီး, ဒီရနံ့ကုထုံရေနံပျံ့လေထုနှင့်ရေမွှေးအိမ်ပြန် humidify ဖို့ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အခိုးအငွေ့ထုတ်လုပ်ရန်။ တိုးတိုးလေး-တိတ်ဆိတ်စစ်ဆင်ရေးအိပ်စက်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်။
လှငျ Shut-off: အဆိုပါရနံ့ကုထုံမြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့, အိပ်ခန်းဖို့ချောချောမွေ့မွေ့အခိုးအငွေ့နှင့်ကောင်းတဲ့အမွှေးအကြိုင်ပေးသည်နှင့်ကိုပိတျထား-ပယ်လိမ့်မည်ဟုအော်တိုရေကိုထွက်ပြေးရသောအခါ။
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့7အရောင်များအလင်း: မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့7ပြောင်းလဲနေတဲ့အရောင်အလင်းအိမ်ရှိပါတယ်ဒီရနံ့ကုထုံ, အသီးအသီးအရောင်များကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ် fixed နိုင်ပြီး, သင်သည်အလုပ်လုပ်ဖတ်နေ, လေ့လာနေသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်နေသောအခါတစ်ဦးအေးဆေးနှင့်ပျော့ပျောင်းသောလေထုကိုဖန်ဆင်း၏။